Koongareeska Mareykanka oo laalay codkii qayaxnaa ee madaxweyne Trump | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Koongareeska Mareykanka oo laalay codkii qayaxnaa ee madaxweyne Trump
Aqalka Senate-ka oo uu maamulo Xisbiga Jamhuuriga ayaa waxa uu yeeshay kulan dhif iyo naadir ah oo ay maalinta koobaad ee sanadka cusub uga doodeen arrinta, middaas oo uu Aqalka Wakiillada ay hore ugu soo codeeyeen.
Hindise sharciyeedkan ku kacaya $740 bilyan oo doolar ayaa waxaa lagu maalgelinayaa siyaasadda gaashaandhigga ee sanadka soo socda.
Senate-ka ayaa 81 ugu codeeyay hindise sharciyeedka loo soo gaabiyo (NDAA) halka 13 ay diideen, iyadoo saddex meelood oo meel loo baahnaa inay meelmariyaan hindise sharciyeedkaasi si loo laalo codka diidmada qayaxan ee madaxweynaha.
Waxa ay imanaysaa laba maalmood uun ka hor marka Kongareeska cusub ee Mareykanka la dhaarin doono.
Koongareeska Mareykanka oo laalay codkii qayaxnaa ee madaxweyne Trump was last modified: January 2nd, 2021 by Admin
Dhageyso Dood ku saabsan saameynta Corona Virus uu ku yeeshey xarumihii caafimaadka ee kuyaaley xerooyinka Barakacyaasha ee Magaalada Baydhabo.
Xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ansixiyey sharci muhiim ah